Natiijada kulammadii Premier League-ga Ingiriiska - BBC Somali
Natiijada kulammadii Premier League-ga Ingiriiska
1 Jannaayo 2011
Image caption Ciyaartoy Manchester United Rooney iyo Berbatov
Liverpool waxay 2-1 dirqi kaga badisay kooxda Bolton oo iyadu bilawday gool dhalinta dhammaadkii qaybta hore ee ciyaarta kaddib markii uu Kevin Davies madaxa gool ugu saxiixay. Liverpool-na waxaa labada gool u kala dhaliyay Torres iyo J Cole qaybtii dambe ee ciyaarta. Liverpool meesha 9aad ayay soo gaartay liiska kala horreynta kooxaha ku loollamaya horyaalka Ingiriiska, waxayna leedahay 25 dhibcood.
Ciyaar kale waxaa iskaga hor yimid kooxaha Manchester City iyo Blackpool, waxaana 1-0 ku adkaatay Manchester City oo goolka qura uu u dhaliyay Adam Johnson qaybtii 1aad ee ciyaarta. Mancity waxay tagtay 41 dhibcood oo ay tartanka wada jir ula hoggaaminayso Manchester United oo iyaduna 41 dhibcood gaartay kaddib markii ay galabta 2-1 kaga badisay kooxda West Brom. Kooxda Stoke waxay 2-0 ku dhufatay Everton, kooxda Sunderland waxay 3-0 ku dardartay Blackburn, kooxda Tottenham waxay 1-0 kaga baxsatay Fulham, West Ham 2-0 Wolves.